ULIVETO: phumla phakathi kwemithi yomnquma kwaye undwendwele iTuscany
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGiorgio & Cristina
Ngeeholide ezikhuselekileyo zika-2021 eTuscany. Ifulethi elizimeleyo kunye nokufikelela kwilali encinci ezindulini. Umbono omkhulu kunye nentuthuzelo yekhaya le-2-4. Indawo efanelekileyo yokutyelela zonke iidolophu zembali zaseTuscany. Relax kwiinduli ezitsha kwaye wonwabe kwimithi yomnquma kunye nembono yehlathi, ngaphandle kweefestile. Ikhitshi eligcweleyo: ngcamla isidlo sangokuhlwa kwi-panoramic yangaphandle okanye isiselo kwipatio yakho ekhethekileyo. Lala nzulu kwintlambo yethu.
Kwiinduli zaseTuscany, phakathi kwemithi emidala yomnquma kunye nehlathi lentlambo eluhlaza ethe cwaka ejongene nedolophu yasePistoia, unokonwabela indawo yokuhlala entle kakhulu kwindlu endala yomfama yango-1700 '. Indlu isandula ukulungiswa, ithatha inkathalo yokugcina iindonga zangaphandle ezenziwe ngamatye kunye nezitena, kunye nokuhlaziya ngaphakathi kwintuthuzelo yangoku oyifunayo kwiholide yokuphumla.
Uya kulala kwindawo epholileyo yelali encinci yamafama kwaye kwiifestile zakho uya konwabela umbono wamasimi omnquma, wecawa "yewaka leminyaka ubudala" kunye neentsimbi tower, amahlathi akhwela phezulu kwindawo ejikelezileyo. iinduli; kunye nesixeko sasePistoia, kude kakhulu ezantsi kwentlambo.
Indlu yakho inomnyango ovaliweyo onamanyathelo ambalwa, kwaye iphakamisa ngaphakathi kokuhendwa kwezinto zemveli zaseTuscany: iinkuni ze-walnut, izitena zomlilo, iiseramikhi ezimhlophe, amatye endalo, iifenitshala zamandulo.
Uya kufumana amagumbi amabini okulala. Kwindawo yokuqala enkulu kukho ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi encinci yomntwana ingongezwa.
Igumbi lokulala le-2 linokucwangciswa kunye nebhedi ephindwe kabini okanye kunye nebhedi enye e-2 njengoko iceliwe.
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle kwiimfuno zakho zeholide.
Igumbi lokuhlambela likhululekile kakhulu kunye neshawari ebanzi, kwaye amanzi ashushu aveliswa ngepaneli yelanga, encedwa kwisifudumezi se-condensation yanamhlanje xa kuyimfuneko.
E-Podere Uliveto unokuphumla kwi-terrace okanye uhambe emasimini omnquma okanye uhambe ngeendlela zakudala ehlathini, okanye ufike kwindawo yokutyela yelizwe lendawo phezu kwentlambo.
Amanenekazi angathatha isigqibo sokufunda isiseko se-Tuscan embroidery ngummelwane wethu ongutitshala ofanelekileyo...
Kwaye ungandwendwela umbindi wesixeko esithandekayo sasePistoia, idolophu enembali enomdla enezakhiwo kunye neecawe ukusuka ngenkulungwane ye-11 ukuya kweye-16, i-15min kude nomnyango wakho ngemoto.
Umbindi wesixeko saseFlorence yiyure enye kude, ukuba ufikelela kwisikhululo sikaloliwe sasePistoia esikufutshane kwaye ulibale malunga nokuhamba ngemoto. Ngendlela efanayo ngololiwe, okanye uqhuba imoto yakho, ungandwendwela uLucca, Pisa, Arezzo, Siena.
Kuthatha ngaphantsi kweyure enye ukuqhuba imoto yakho ukuya kwiintaba eziphakamileyo ze-2000m ze-Abetone, okanye ukuya kulwandle lwaseViareggio, okanye kwezinye iidolophu ezinomdla ezifana nePescia, San Gimignano, Volterra ...
Ukuba awukuthandi ukuqhuba imoto, ungafika e-Uliveto ngololiwe kunye nebhasi yoluntu ukusuka kwisikhululo sasePistoia.
Amashiti kunye netawuli kunye nesinxibo setafile ziya kubonelelwa kuwe.
Ucoceko oluqhelekileyo lokugqibela luyaboniswa kwaye lubandakanyiwe kumaxabiso.
Izaphulelo ziyafumaneka ukuze uhlale ngeveki.
Bhala imfuno yakho KWIMIYALEZO YABUHLUNGU phambi kokuba ubhukishe kwaye siza kuphendula kamsinyane!
Sisembindini wendawo yokuphumla yaseTuscany.
IPistoia ayisiyodolophu "ezele ngabakhenkethi", kodwa inembali entle, kunye nezikwere ezintle zamandulo, iicawe kunye nezakhiwo. Umbindi wesixeko saseFlorence yiyure enye ukusuka kumnyango wethu ukuba usebenzisa uloliwe. IPisa neLucca kunye nezinye iidolophu ezinembali zinokutyelelwa ngosuku olunye. Iilwandle ezininzi zolwandle zihamba ngeyure enye. Iintaba kunye namahlathi e-Abetone nazo ziyiyure enye yokuhamba ...
Umbuki zindwendwe ngu- Giorgio & Cristina
Ndiyavuya ukucebisa iindawo ezintle zokutyelela kwindawo yethu kunye nayo yonke iTuscany, indlela yokufumana izikwere zembali yePistoia kunye neecawe kunye neemyuziyam. Okanye ukubonelela ngeethayimthebhile zikaloliwe ukufikelela kwiziko laseFlorence ngeyure enye ukusuka kumnyango wakho. Kwaye ndiyathanda ukuncokola ngemithi yomnquma kunye neoli elungileyo esiyivelisayo...
Ndiyavuya ukucebisa iindawo ezintle zokutyelela kwindawo yethu kunye nayo yonke iTuscany, indlela yokufumana izikwere zembali yePistoia kunye neecawe kunye neemyuziyam. Okanye ukub…
UGiorgio & Cristina yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pistoia